वर्षैभरि ‘फ्लप’ फिल्म, ९ महिनामा १ सय १८ फिल्म दर्ता ! « Khabarhub
वर्षैभरि ‘फ्लप’ फिल्म, ९ महिनामा १ सय १८ फिल्म दर्ता !
काठमाडौं – २०७५ लाई बिदाइ गर्न केही हप्ता मात्र बाँकी छ । यस वर्ष रिलिज भएका धेरै फिल्मले आशा गरिएअनुरूप व्यापार गर्न सकेनन् । एकाध फिल्मले बाहेक अरु फिल्म डुबे ।
चलचित्र विकास बोर्डमा साउनदेखि चैत्रको मध्येसम्म आइपुग्दा सयभन्दा बढी फिल्म दर्ता भएका छन् । चलचित्र विकास बोर्डमा साउनयता यो समाचार तयार पार्दासम्म १ सय १८ वटा फिल्म दर्ता भएको विकास बोर्डको रेकर्ड छ ।
यस्तै ९ महिनामा ९८ वटा फिल्म सेन्सर भएको विकास बोर्डले जनाएको छ । यसरी हेर्दा महिनामा दश वटा फिल्म रिलिज भएका छन् । जुन नेपाली बजारअनुसार निकै धेरै हो । नेपाली फिल्म धेरैभन्दा धेरै रिलिज भएका कारण पनि दर्शकले यतिबेला नेपाली फिल्म भन्नबित्तिकै नाक खुम्च्याउन थालेका छन् ।
फिल्म हेर्न दर्शक आउँदैनन्
एकैपटक हलमा चारवटासम्म फिल्म रिलिज भए पनि नेपाली फिल्म भने घरेलु दर्शकको नजरमा पर्न सकेका छैनन् । यतिसम्म कि, हलमा दर्शक ओराल्न सक्ने भनेर विश्वास गरिएका नायक अनमोल केसीको फिल्मले पनि माहोल बनाउन सकेन । पछिल्लो समय ‘छक्का पञ्जा’ सिरिजले भने राम्रो कमाइ गर्ने गरेका छन् । यता हल मालिकले पनि विदेशी फिल्मले चलाएर हल पाल्नुपरेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७५, मंगलबार २ : ०० बजे